MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA DOGUE DE BORDEAUX - EEYAHA
Bordeaux Mastiffs - haween: Red Dayrta Roxy (Roxy), 2½yrs, 119 lb., 'kiciyaha qoyska' lab: Tonka Toy Rhys (Reese), 2 yrs, 128 lb., 'waa la fahmi karaa waana la difaaci karaa qoyskiisa'
Liiska Dogs de Bordeaux Isku Darka Eeyaha
madow black cur hound mix
Dogue de Bordeaux, oo sidoo kale loo yaqaanno Mastiff Faransiis ah oo mararka qaarkoodna loo yaqaan Bordeaux Bulldog, waa mastiff yar oo gaaban. Madaxa duudduubnaa waa mid ballaaran, culus oo ballaadhan. Ragga waxay lahaan karaan wareegga madaxa 27-30 inji (68-75cm). Afka waa xoogaa gaaban (1/3 wadarta dhererka madaxa), ballaaran, awood badan lehna dhumuc weyn, oo leh joogsi muuqata. Sanku waa weyn yahay oo midabka sanka oo ballaadhan-furan wuxuu kuxiranyahay maaskaro eeyga. Ilkaha waxay ku kulmaan qaniinyo yar. Bishimaha kore waxay si dhumuc leh u sudhan yihiin daanka hoose. Maqaarka qaro weyn ee qoorta ayaa dabacsan, oo sameysanaya sayax muuqda. Indhuhu waa baraf madow ilaa midab madow, waxay kuxirantahay midabka eyga, waana lakala fogeeyay. Dhegaha waa yar yihiin, hoos ayey u laalaadeen, marka loo eego eeyga waana midab madow. Dabada ayaa qaro weyn salka ku haysa, oo ku tifaxaysa dhibic. Laabta ayaa qoto dheer, ballaadhan, gaadhaysa meel ka hooseysa xusullada. Lugaha waa muruq. Koodhku waa mid gaaban oo jilicsan oo leh maqaar dabacsan oo jilicsan. Midabada koofiyaddu waxaa ka mid ah noocyo kala duwan oo fawn ah oo loo yaqaan 'mahogany' oo leh maaskaro madow oo madow ama madow ah agagaarka iyo sanka hoostiisa oo ay ku jiraan bushimaha iyo qarka isha. Marmarka qaarkood calaamado cad ayaa ku yaal laabta iyo caarada suulasha.
Bordeaux waxay leedahay dabeecad wanaagsan oo deggan. Waa mid aad u daacad ah, dulqaad leh oo u heellan qoyskiisa. Cabsi la'aan iyo iska horkeen shisheeyaha, isagu waa waardiye fasalka koowaad iyo eeyga ilaaliya. Bulsho si aad u wanaagsan xayawaanka kale, doorbidayaa laga bilaabo da'da hore si looga fogaado inuu ku xadgudbo eeyaha kale. The Dogue de Bordeaux khuuro iyo hooris. In kasta oo muuqaalkiisa cabsi leh, Dogue de Bordeaux wuu u roon yahay carruurta iyo xubnaha qoyska. Si kastaba ha noqotee, kani waa xayawaan awood badan, kumana haboona milkiilaha eyda khibrad la’aanta ah. Ujeedada tababarka eeygan ayaa ah gaaro heerka hogaamiyaha xirmada . Waa a dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo baakadeeda . Markii aan dadku waxay la nool yihiin eeyaha , Waxaan noqonay xirmadooda. Xirmada oo dhan waxay lashaqeysaa hal hogaamiye. Khadadka si cad ayaa loo qeexay xeerarna waa la dejiyay. Adiga iyo aadamaha oo dhan WAA INAAD uga sarraysiisaan sida eyga. Taasi waa sida kaliya ee xiriirkaagu u noqon karo mid guuleysta. Noocani wuxuu u baahan yahay deganaan, laakiin milkiile adag oo soo bandhigaya awood dabiici ah eeyga. Mid kalsooni iyo is waafajin leh.
Dhererka: 23 - 30 inji (58 - 75 cm)
Miisaanka: 120 - 145 rodol (54.4 - 65.2 kg)
Intooda badani waa caafimaad qabaan, laakiin noocyadu waxay u nuglaan karaan sinta dysplasia. Waxa kale oo jira xaalado suuxdin, dhibaatooyin wadnaha ah iyo hyperkeratosis. Biyo-xireennada badanaa waa in lagu qalo.
Noocani wax fiican kuma qaban doono aqalka dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Iyagu gudaha kuma jiraan firfircoonaanna way fiicnaan doonaan iyagoo aan lahayn deyr.
Wuxuu ubaahanyahay jimicsi badan. Waxay u baahan yihiin in lagu qaado a maalin kasta, socod dheer . Eeyaha aan lahayn jimicsi maskaxeed iyo / ama jireed ayaa horumari kara arrimaha dhaqanka .
Qiyaastii 5-8 sano.
Wax aad u yar ayaa loo baahan yahay. Noocani waa celcelis daadiya.
Waxaa jira aragtiyo badan oo ku saabsan asalka Dogue de Bordeaux. Waxaa laga yaabaa inuu ka soo farcamay Bulldog , Mastiff Tibetan iyo Giriigga iyo Roomaanka Molossus , Mastiffs-ka ay Alans u keeneen Yurub, eeyaha Aquitaine ama eyda Isbaanishka ee Burgos ka yimid. Dhamaadkii qarniyadii dhexe, Dogue waxaa loo adeegsaday darawal lo 'iyo ilaaliye shaqsiyeed. Caruur badan ayaa ku dhimatay xilligii Kacaankii Faransiiska. Ka dib markii nambarka dagaalka uu mar kale kacay. Raymond Triquet iyo kooxdiisii ​​Faransiiska Dogue de Bordeaux Club ayaa badbaadiyey taranka. Dogue de Bordeaux hadda si fiican ayaa looga aasaasay Faransiiska wuxuuna caan ka noqday dalal kale. Noocani wuxuu u adeegay sida eey dagaal, ilaaliye adhi ah, lo 'daaqe, eey waardiye ah, oo loo tababbaray inuu ujeedo dibi, orso, iyo jaguar, iyo ugaarsade xayawaanno ah. Nooca waxaa aqoonsaday AKC sanadkii 2008.
Reese iyo Roxy the Dogues de Bordeaux qiyaastii 2 sano jir
Ti Amo de Dame Midnight aka Meeko, sawir qadarin leh Kennel Hall of Fame
Otto the Dogue de Bordeaux oo 6 bilood jira ka dib markii uu ku ciyaaray dhoobada.
Razz the Dogue de Bordeaux oo 3 sano jir ah Mathilde— Waxaan ahay 170 lb france Mastiff waana jeclahay Mathilde. Waxay jeceshahay inay i socoto, inkasta oo ay i raaci karto haddii ay rabto.
Horyaalka Australiya Runderkraal - Chevelle 12 usbuuc, qadarin sawir Chienparadis Kennels
Oo kani waa iyadii markay tahay 16 bilood. Bal eeg intee korisay! Lahaanshaha sawirka Chienparadis Kennels
'Tani waa Tars Tarkas, oo ah ninkeyga 15-jirka ah ee Dogue de Bordeaux booqashadiisa daaweynta tabaruca ah ee booqashada guriga waayeelka maxalliga ah. Tarkas waxay noqotay Ey Lagu Daaweeyo Door Certified da'da 1 sano iyo 10 maalmood. Dabeecaddiisa jilicsan ee kalgacalka leh ayaa isaga ka dhigaysa eey daaweyn cajiib ah.
'Kani waa sawirka labadayda nin ee Dogue De Bordeaux's. Labadooduba waa Eeyo Daaweyn Shahaadaysan oo wata Shahaadada IWC. '
Max the Dogue de Bordeaux (Faransiis Mastiff) markuu jiray 6 sano
Eeg tusaalooyin badan oo ah Dogue de Bordeaux
Dogue de Bordeaux Sawirada 1
Dogue de Bordeaux Sawirada 2
Dogue de Bordeaux Sawirada 3
Dogue de Bordeaux Sawirada 4
Dogue de Bordeaux Sawirada 5
Dogue de Bordeaux Sawirada 6
Dogue de Bordeaux Sawirada 7
eeyaha ka bilaabmaa o
buluug mottled eey xoolo Australia
sirdoonka eey pomeranian SUNTZU shih
irish staffordshire bull terrier breed